6 Sanadood Kadib Mamnuucistii Al Shabaab Ee Hay'adda WFP Soomaalida oo ay u Caddaatay Waxa ay yihiin Gargaarayaasha Q.Midoobe WARBIXIN.
Wednesday June 15, 2016 - 15:08:29 in Wararka by
Dabayaaqadii sanaddii 2010 ayay xarakada shabaabul Mujaahidiin soo saartay go'aan adag oo lagu mamnuucayo hay'adda cuntada adduunka WFP.
Al Shabaab waxay WFP ku eedeysay in raashin dhacay oo sun ah ay siinayso bulshada soomaalida islamarkaana ay cuuryaamin ku heyso wax soo saarka dalagyada dalka.
Mu’asasada Al-kataib ayaa dhowr mar soo bandhigtay raashin dhacay oo WFP bakhaaradeeda lagasoo saaray kaasi oo ay ku doonaysay in ay ku sumeyso dadka Masaakiinta ah.
Al Shabaab ayaa xilligaasi WFP usoo bandhigtay in raashinka ay qeybinayso ee ah galleyda iyo messegada ay ka iibsato beeralayda soomaaliyeed kadibna shacabka ay u qeybiso dallagga maxalliga ah ee nadiifka ah balse WFP oo qorshaheedu ahaa mid cad ayaa diiday.
Xiligii go’aankaasi laga qaatay WFP waxaa cambaarayn afka furtay dowladaha reergalbeedka NGO-yo iyo dowladda Federaalka oo Al Shabaab ku eedaynayay in ay gargaar udiidantahay shacabka soomaaliyeed!.
Sanado kadib Hagardaamada WFP ayaa gaartay dhammaan gobollada dalka soomaaliya kadib markii ay raashin dhacay uqeybisay dad barakacayaal ah.
Sanaddii lasoo dhaafay maamulka DF-ka ugu magacaaban sh.hoose ayaa sheegay in ay qabteen raashin uray oo hay’adda cuntada adduunka ay ku doonaysay in ay ka qeybiso goobaha ay deganyihiin dadka barakacayaasha ah.
WFP dhegna jalaq umasiin in dalka ay kusoo daabusho raashin dhacay oo halis gelinaya nolosha kumanaan qof soomaali ah, taliska booliska dowladda Federaalka ayaa shalay ku dhawaaqay in garoonka diyaaradaha Muqdisho lagu qabtay raashin qurmay oo hay’adda WFP u daabuli laheyd dhanka gobolka Gedo.
Cuntada dhacday ee lagusoo bandhigay garoonka diyaaradaha Muqdisho waxaa kamid ah Galleey Messego,Boorasho iyo saliid dhammaantood waqtigoodu dhacay oo aanay suurtagal ahayn in Bani’aadamku isticmaalo.
Raashinkan dhacay ee Q.Midoobe dalka soo gelisay wuxuu imaanayaa waqti malaayiin soomaali ah ay isku diyaarinayaan gurashada dalagyadii ay beerteen xilli roobaadka guga.
Xilkasnimada Hoggaanka xarakada Al Shabaab iyo maamulladeeda Islaamiga ah ayaa 6 sanadood kadib u caddaatay dhammaan dadka soomaalida, shaki kuma jiro in madaxda DF-ka qudhooda ay taasi uqirayaan xarakada Al Shabaab balse dabadhilifnimo iyo shisheeye jaceylnimo ayaa ku riixaysa in ay wali ka daba ordaan hay'adaha Q.Midoobe.